बलिवुड/हलिउड – ZoomNP
बलिउड नायक सलमान खान आइएसआइएसका एजेन्ट ! उनको हत्या गर्ने मिति तय
बिग बसको १० औं संस्करणको सबैभन्दा चर्चित प्रतिस्पर्धीमा स्वामी ओमजीको नाम आउँछ । बिग बसका अन्य सदस्यसँग उनको लगातार विवाद हुँदै आएको छ । आफूलाई भारतीय संस्कृतिको समर्थक र पोषक बताउने स्वामी ओमका विभिन्न चरित्र बिग बसमा हेर्न पाइयो ।
उता आमाको दोस्रो बिहे हुँदै थियो, यता छोरी नाचेर थाकेकी थिइनन्
अभिनेत्री श्वेता तिवारीले टिभीमा धेरै सो गरेकी छिन् । हालै उनी ‘बेगुसराय’ मा देखिएकी थिइन् । खबर यो छ उनी छिट्टै नै आमा बन्दैछिन् ।
उनले आफ्ना साथीहरुसँग मस्ती गरेको फोटो सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेको तस्बिरमा उनको बेबी बम्प प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
श्वेताले दोस्रो बिहे गरेकी हुन् । उनको दोस्रो विवाहको संगीत सेरेमोनी देखि विवाहको फंसनसम्म छोरी पलक नाचेरै थाकिनन् ।
एक्टर राजा चौधरीसँ...
टुंगिने भयो आदर्श जोडी मानिएका चर्चित हलिउड जोडी ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीको सम्बन्ध
असोज ५ । बलिउडका चर्चित जोडी ब्राड पिट र एन्जेलिना जोलीको डिवोर्स हुने भएको छ । सन् २००४ एक भएर सन् २०१४ मा बैबाहिक जीवनमा वाँधिएका उनीहरु विश्वमै चर्चित बनेका थिए । तर हाल आएर उनीहरुको वैवाहिक जीवन समाप्त हुने वीवीसीले जनाएको छ ।
हलिउडकी सर्वाधिक चर्चित नायिका एन्जेलिनाले ब्राड पिटसँग डिभोर्स गर्नका लागि अदालतमा फाइल दर्ता गरेकी छिन् । आफ्नो १२ वर्षको संगैको यात्रा टुंग्याउने निर्णय गर्दै नायिका...
९ कक्षा पढ़दैगर्दा मोडलिङमा पाइला टेकेकी पुर्व मिसवर्ल्ड ऐश्वर्या कस्ती थिइन त्यो बेला? हेरेर अचम्ममा पर्नुहुनेछ (फोटोफिचर)
फेशन वल्र्डमा नाम कमाएपछि बलिउडमा करिअर बनाएकी अभिनेत्री हुन् पुर्व मिस वल्र्ड ऐश्वर्या राय बच्चन । फेशन सोमा कटरीना कैफ, दीपीका पादुकोण, ऐश्वर्या राय जस्ता अभिनेत्रीहरु अझै पनि उत्तिकै दबदबा रहेको छ ।
सानो छँदा आर्टिटेक बन्ने सपना बोकेकी ऐश स्कुल देखिनै मोडलिङमा चासो देखाउने गर्थिन् । मोडलिङको पहिलो अफर उनलाई कक्षा ९ मा पढ्दा आएको थियो । यस पछाडि उनले कोक, फुजी र पेप्सीका विज्ञापनमा काम गरेकी थिइन् । मोडलिङमा...
असफल प्रेमी सलमान खानका १० चर्चित प्रेमिका, कस्तो रह्यो सबैसंग को सम्बन्ध? जुन तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ!
उनको विवाहका विषयका कारण मिडियामा ठुलो चर्चा आज पनि उत्तिकै हुने गर्छ । उनको युवतीहरुको सम्बन्धलाई लिएर पनि मिडियाका विषय बन्ने गर्छन् । कतिले त उनलाई भर्जिन समेत भन्ने गर्छन् । तर, उनलाई फिल्ममा सफलता पाउनका...
शाहरुख खानको छोरा र अमिताभ बच्चनकी नातिनीको उत्तेजक सेक्स भिडियो सार्वजनिक(भिडियो सहित)
एजेन्सी । शाहरुख खानको छोरा आर्यन खान र अमिताभ बच्चनको नातीनि नभ्या नभेलीको भिडियो क्लिपले अहिले बलिउडमा तहल्का मच्चाईरहेको छ । यी दुवै जना अहिले लन्डनको एक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार यीनिहरुको सम्वन्ध धेरै नजिकिएको थियो ।
यी दुवै जना एउटा पार्टीमा सँगै भेटिँदा खिचिएको तस्विर ट्विटर मा अपलोड भएपछि करोडौं पटक रिट्विट भएको थियो । अहिले सार्वजनिक भएको भिडियोमा यी दुवैजनाले कारभित्र सेक्स गरिरहेको देखिएको छ । आधारिक रुपमा कतैबाट पनि यो भिडियोको बारेमा केही धारणा आएको...